ajụjụ Ụgbọelu Deisgn
1 afọ 2 ọnwa gara aga #810 by jimos
Ọ dị onye ọ bụla nọ ebe a nke nwere ike ịmepụta ụgbọ elu ụgbọelu maka obodo? Ana m achọ mmadụ ka ọ mepụta ogologo oge Turbo prop Onye nwere ike ibu ibu / Pax n'ebe dị anya nke 3500 NM Ná ​​nnukwu ọsọ. Ọ ga-amasị m iji nke a na Air hauler 2 otú ya MTOW M na-eche na agafe karịa 3 nde ma eleghị anya, Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike inyere m aka ịma, anyị nwere ike bulite ya ka ọ bụrụ onye ọ bụla iji mee ihe?
11 ọnwa 5 ụbọchị ago - 11 ọnwa 5 ụbọchị ago #952 by DRCW
Ndewo, Ee Enwere m ike inyere gị aka iji ụgbọ elu dị ugbu a ị na-eji na-egosi gị otu esi edozi ụgbọelu cfg faịlụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ na ọsọ ụgbọelu gị dị elu. Ọ bụrụ na i mepebeghị faịlụ cfg tupu ịchọta ya dabere na ụdị mbipute P3D ị nwere. 1,2 nke 3, na 86 kwesịrị ịbụ na Mmemme x (XNUMX) n'ime kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị nweta P3Dv4, ọ dị na ọkọlọtọ gị Fọchị faịlụ faịlụ n'okpuru Lockheed Martin. Ugbu a, achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na ịnyefe gị bụ ihe ma ọ bụ jet. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mma, mgbe ahụ, m ga-ama ma ọ bụrụ na ọ bụ nsụgharị turbo. Enweghị ozi a, naanị m nwere ike ịme gị ihe atụ: M ga-ewere 2 engine engine maka ọkọlọtọ a. Ozugbo ị mepee Lockheed Martin Folder, pịgharịa gaa na ngwa oru, mepee ya mgbe ị ga-achọta ya ụgbọelus nchekwa, mepee ya ma chọpụta ụgbọelu ị chọrọ ịgbanwe. Ozugbo ị mepere folda ụgbọelu ị họrọla na a ga-enwe ahịa faịlụ ụgbọelu cfg . Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị mepee faịlụ cfg, pịa ya ma mepee ya na "notepad" Ọ bụrụ na usoro a na-ekwu na ị chọrọ ikike iji mee ya, wee pịa ma dọkpụrụ folda ụgbọelu niile na desktọọpụ gị ka ị nwee ike ime mgbanwe.
Ihe omuma a ka m wetara na De Havilland Beaver DHC2
Nzọụkwụ otu na-agbanwe ụdị Max gị
max_gross_weight = 5090 // pound) Meewanye 5090 site na 2000 ka ọ na-agụ 7090
efu_weight = 3410 // (pound)
Nzọụkwụ 2 Na-abawanye gị nso
engine_type = 0 // 0 = Piston, 1 = Jet, 2 = Ọ dịghị onye, ​​3 = Helo-Turbine, 4 = Rocket, 5 = Turboprop
Engine.0 = -0.15, 0.0, 0.0 // (ụkwụ) ogologo oge, mpụta, nkwụsịtụ anya site na ntinye aka
mmanụ_flow_scalar = 1.0 // Egwu na-agba ọsọ Iji mee ka mgbanwe 1.0 gbanwee ka ọ gụọ 0.48
min_throttle_limit = 0.0 // Nke kachasị pasent. A na-emekarị ka nsogbu turbine kwụsị
Nzọụkwụ 3 Mụbaa ike njikwa
ike_scalar = 1.0 // Piston ike scalar
cylinder_displacement = 109.4 // Cubic sentimita asatọ kwa cylinder
compression_ratio = 6.0 // Compression ruru
nọmba_of_cylinders = 9 // Ọnụ ọgụgụ nke cylinders
max_rated_rpm = 2300 // Max gosiri RPM
max_rated_hp = 450 // Max gosiri HP gbanwee 450 na nọmba dị elu na nke a, m ga-agbakwunye 200 hp ka 450 wee ghọọ 650
Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ka m mara
Nchịkọta ikpeazụ: 11 ọnwa 5 ụbọchị gara aga site na DRCW.
Oge ike page: 0.098 sekọnd